Ifulethi elihle elinamachibi eTuscany - I-Airbnb
Ifulethi elihle elinamachibi eTuscany
San Martino in Tremoleto, Poppi,Toscana, i-Italy
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Elena
Ifulethi elincane elithandekayo epulazini elidala lika-1800, emagqumeni aluhlaza aseTuscany. Endaweni ethulile futhi enomhlaba jikelele, ilungele labo abafisa ukujabulela ukuhamba kancane kwemvelo futhi bazitike ngokuphumula okuphelele. Ngengadi yayo enhle enamachibi okubhukuda, iyisixazululo esiphelele sezithandani nabahamba bodwa, nezilwane ezifuywayo zamukelekile.
I-Casina Gelsomino iyifulethi elincane elihle elisesitezi esiphansi, ekuqaleni okwakungamathuluzi epulazi kanye nedepho yokuvuna ama-apula.
Iqukethe: ikhishi, igumbi elilodwa eliphindwe kabili, igumbi lokugezela elilodwa.
Kukhona negceke elikhulu elibheke ingadi enkulu kanye nechibi.
Ingaphakathi libuyiselwe ngobuhlakani ngokwesiko laseTuscan, kusetshenziswa izinto zokuqala nezigaywa kabusha lapho kungenzeka, noma kunjalo izinto zasendaweni njengokhuni, insimbi ekhandiwe, itshe. okwedlule.
ubusuku obungu-7 e- San Martino in Tremoleto
Ipulazi lisemazansi kwedolobhana lasemakhaya iSan Martino eTremoleto, kumasipala wasePoppi, idolobhana elihle lasendulo elibekwe kumhlahlandlela wamadolobha amahle kakhulu e-Italy. Sisesigodini esiluhlaza seCasentino, phakathi kwamadolobha amabili amahle obuciko: iFlorence ne-Arezzo. Ngaphakathi kwebanga lokuhamba kukhona amahlathi acwebile eNational Park, intaba engcwele yaseLa Verna nendawo yayo engcwele yaseFrancisca, i-hermitage kanye nesigodlo sezindela saseCamaldoli.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho ngithinta iselula ngaso sonke isikhathi, uma ungidinga.
Bese, ngezinye izikhathi, ngiba sepulazini ukuze ngilungise ingadi futhi ngigcine ichibi lihlanzekile.
Hlola ezinye izinketho ezise- San Martino in Tremoleto namaphethelo